I-Super Bright Studio Near Ramana ene-WIFI ne-AC - I-Airbnb
I-Super Bright Studio Near Ramana ene-WIFI ne-AC
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Prem
Ngo-84 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
U-Prem Ungumbungazi ovelele
Ikhaya elibanzi nelikhanyayo elinendawo ethule nethule eduze kweramana. Kukhona umatilasi wezinga eliphezulu,
ikhishi lesimanje . sinendawo yokudlela esezingeni eliphezulu ephahleni (Ingane Yangaphakathi) esakhiweni sethu esinombono omuhle weNtaba i-arunachala eyenza usuku lwethu lube lukhethekile, lube nokuthula futhi lukhululeke.
Imizuzu emihlanu uhamba ngezinyawo ukusuka e-ramana, eduze ne-sivasathi, njll...
Indawo yami yendlu iseduze kakhulu ne-ramana ashram, indawo ehlanzeke kakhulu, enefenisha ephelele, enekhishi eliphelele, i-balcony enetafula nezihlalo, umbhede onethezekile osezingeni eliphezulu kakhulu, ukukhanya kwemvelo okwengeziwe namawindi amaningi azungeze indlu, igumbi lokugeza elineshawa eshisayo nebandayo. njll...
I-wifi esheshayo – 84 Mbps
4.93 · 57 okushiwo abanye
Ngiyazithanda izingane zasendaweni .. izinkomo zasemgwaqweni ezimnandi, isihlahla esinomthunzi sikleliswe uhambo oluya eRamana Ashram, indlela enqamulelayo eyimfihlo eya e-Shiva/Shakti darshan, eseduze kakhulu ne-ashram ehlala icula i-Yogi RamSuratKumar enezibusiso eziyi-5x mini-girivalam. Izimakethe eziseduze nezitolo. Morning izinkawu. Konke okumangalisayo !ndia okunikezwayo. sinendawo yokudlela esezingeni eliphezulu ephahleni (Ingane Yangaphakathi) esakhiweni sethu esinombono omuhle weNtaba i-arunachala eyenza usuku lwethu lube lukhethekile, lube nokuthula futhi lukhululeke.
Ngihlala ngitholakala noma nini lapho isivakashi sidinga umbhalo wami, ucingo, i-imeyili...
UPrem Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Tiruvannāmalai namaphethelo